I-Ultrasonics Yezindawo zokudlela ze-Gourmet - Hielscher Ultrasound Technology
Amadivaysi e-Ultrasonic enziwe ngabakwaHielscher asetshenziswa ngabapheki bezindawo zokudlela ezisezingeni eliphakeme zokupheka ezintsha, ezisezingeni eliphakeme. Lokhu kufaka ukukhishwa kwe-flavour, ukuguqulwa noma ukuguqulwa kokuguqulwa. Amadivayisi we-Hielscher ultrasonic asetshenziselwa izinhlelo eziningi, futhi afakazelwe ukusebenza kwawo, ukuthembeka nokusebenza kahle. Ngenxa yezinzuzo zazo ezingafani nalutho, kusetshenziswe amaprosesa we-ultrasonic isikhathi eside ku imboni yokucubungula ukudla, isib. kuya emulsify uketshezi okungenakuqhathaniswa noma kuya khipha izinto zangaphakathi-zeselula (isb. izinhlanganisela zephunga, ama-lipids, nezinye izinto).
Insimu entsha yokusebenza yama-processors e-ultrasonic yindlela yokusetshenziswa kwe-gourmet cuisine. Ikakhulukazi ekhishini elisezingeni eliphezulu kanye nokudla okuyi-molecular, kunezinhlelo eziningi zokulungisa ukudla okuphawulekayo, okumangazayo i-diner nge-flavour entsha, enamandla.
Ngo-Mashi 2010, Sang-Hoon Degeimbre – umpheki nomnikazi wendawo yokudlela edumile L'air du temps e Noville sur Mehaigne (ngaseNamur, eBelgium) – i-ultrasound eyethulwa njengendlela yokuthuthukisa yokulungiselela ukudla okungavamile Starchefs.com.
Umpheki wezinkanyezi uSang-Hoon Degeimbre ulungiselela ukukhishwa kwemifino esebenzisa i-ultrasonicator UIP1000hd
Ilungiselela ukukhishwa kwemifino usebenzisa i-ultrasonicator UIP1000hd
I-Sang Hoon Degeimbre: umpheki wezinkanyezi nge-ultrasonicator I-UIP1000hd
U-Degeimbre uthi usebenzisa umshini we-ultrasonic ngokukhipha izingxenye ezizithandayo zemifino, izimbali kanye namakhambi. Akafuni ukupheka, kodwa ufuna ukuba nengxenye eyinetha kakhulu yemifino. Usebenzisa iprosesa yakhe ye-Hielscher ultrasonic UIP1000hd (1000W, 20kHz) for izicelo ezahlukene: By sonication, kungenzeka khipha izakhi ezinomsoco kunazo zonke nezithandekayo zezithako ngasinye. Lokhu kuvumela uDegeimbre ukuba afinyelele ukuhlanza kokunambitheka okungavame ukulahleka ngenkathi yokupheka. Ngaphezu kwalokho, umpheki wezinkanyezi uthola ukuhlolwa okuphumelelayo nokukhipha imfucumfucu kanye nenkukhu yamasheya. Ngenkukhu, uthola imiphumela emihle ngokumisa inyama yenkukhu ngaphandle kwamathambo ukuze uthole inhlanzi ehlanzekile kakhulu yenkukhu. Ku-StarChefs.com, umkhwenyana wezinkanyezi weMicrosoft uSion-Hoon Degeimbre ubonisa isibonelo esithombeni esisodwa sokudla kwakhe okwamanje, ukusebenzisa i-Hielscher sika-UIP1000hd ngokudla. Ukuze kulungiselelwe indalo yakhe Ultrasonic Shrimp Stock, umpheki waseBelgium-isiKorea uhlonipha zonke izithako (ama-shrimps, amanzi, utamatisi puree, isanqante, usawoti) ngama-amplitude angu-50% imizuzu engu-10.
I-Ultrasound nayo iyakwazi ukukhipha imishanguzo evame ukuhlukanisa ngaphandle kwe-emulsifiers. Ngakho-ke, i-ultrasonication ivumela ukulungiswa kwe-vinaigrette ebushelelezi, i-marinades ehlwabusayo nemayonnaise e-creamy, ngaphandle kokusebenzisa ama-emulsifying agents. Ukusebenza okuvelele kwe-ultrasonics ye-flavouring yeziselo kubuye kusetshenziswe ku ukukhiqizwa uviniga. I-Ultrasound yenza kube lula ukukhiqiza uviniga ngezambatho ezihlukahlukene ezihlukahlukene, njenge-raspberry, i-lime, i-chili, i-thyme.
Ukuze uthole imiphumela ephezulu kakhulu kusizinda sokunambitheka, i-Hielscher itusa ukuba usebenzise ama-macerate noma ugaye le nto ngaphambi kokunikezwa kwe-sonication. Ngale ndlela, le ndaba inikeza indawo engaphezulu ukuze kutholakale ukwaziswa okungaphezulu kwamaselula. Lokhu kuthuthukisa imiphumela ye-ultrasonic flavour extraction futhi kuholela ekunambithekeni okunamandla kakhulu.
Ukusethwa kwe-Sonication nge I-UIP1000hd ukukhishwa kwamakhemikhali e-bioactive kusuka ku-botanicals ku-batch. [Petigny et al. 2013]
Ukusetshenziswa kwe-ultrasonics ku-chef cuisine kulula kakhulu. Ngesilinganiso esincane seqoqo – kuze kube ngamalitha angu-2-4 – ungasebenzisa Amadivayisi we-Ultrasonic Laboratory, njenge- UP200Ht (bheka isithombe kwesobunxele) noma i UP400St. Ukuze uthole amanani amakhulu, i-Hielscher inikeza amadivaysi, njenge- I-UIP1000hdT ngama-sonotrode akhethekile enzelwe izinhlelo zokupheka.
100 kuya ku-2000mL 10 kuya ku-200mL / min UP200Ht
200 kuya ku-4000mL 20 kuya ku-400mL / min UP400St
250mL kuya ku-5L 50mL kuya ku-1L / min UIP500hdT
0.05 kuye ku-10L 0.1 kuye ku-2L / min I-UIP1000hdT
Uyacelwa ukuthi usebenzise leli fomu elingezansi ukucela imininingwane eyengeziwe mayelana nama-ultrasonicators wezinhlelo zokudla nezintengo zazo. Sizojabula ukuxoxa ngesicelo sakho nawe futhi sikunikeze ngedivayisi ye-ultrasonic ehlangabezana nezidingo zakho!
I UP200Ht iyi-processor ye-ultrasonic yezinhlelo zokupheka ezifana ne-emulsification, isizinda kanye ukuthambisa inyama.